IPhone 7 ga - akụ ụlọ ahịa na Septemba 16 dị ka Evan Blass | Akụkọ akụrụngwa
IPhone 7 ga-akụ ụlọ ahịa na Septemba 16 dị ka Evan Blass si kwuo
Evan Blass Ọ bụrụla ezigbo guru n'ihe banyere ozi gbasara ngwaọrụ mkpanaka ọhụụ, n'ọtụtụ akụkụ n'ihi nnukwu ntụkwasị obi o nwere, mgbe ọ nwesịrị ozi ọma na-enweghị atụ. N'oge na-adịbeghị anya ọ dị ka Apple chọrọ inyefe gị ozi ndị ọzọ na ekele maka nke a anyị amatala ụbọchị ụfọdụ gara aga A ga-egosiputa iPhone ọhụrụ na Septemba 12.
Otú ọ dị, Site na ozi a Blass mere ọtụtụ obi abụọ n'etiti ndị ọrụ na-amaghị nke ọma ma ọ bụrụ na nke ahụ ga-abụ ụbọchị ngosi ma ọ bụ ụbọchị mbata ahịa nke ọnụ ọhụrụ ahụ. Na ọ joyụ niile, ọkachamara ọkachamara chọrọ inye nkọwa ọhụrụ na nke a.
Ma ọ bụ na Evan ekwenyela, ọzọ site na profaịlụ ya na Twitter, na a ga-ewepụta iPhone 7 na Septemba 12 na naanị ụbọchị 4 ka e mesịrị, ya bụ, na Septemba 16 a ga-ere ya na ụlọ ahịa na ọtụtụ mba. Otu n'ime ha ga-abụ United States na-abụghị Spain, nke a na-atụ anya na ọ ga-abụ na agba nke abụọ nke mba ebe a na-ere ahịa mkpanaka ọhụrụ si Cupertino.
Naanị iji dokwuo anya, nke a na-ezo aka na ntọhapụ mkpọsa, ọ bụghị mmemme mwepụta. Iji kọwaa nke ọma, ọ ga-eme na Fraịde, Sept. Nke 16.
N'oge a anyị ga-aga n'ihu na-eche ọbịbịa nke iPhone 7, nke obere oge fọdụrụ maka ya, mana n'ihi ntoputa nke ozi anyị nwere ike ịmaraworị ụbọchị nke anyị ga-amata ya na gọọmentị na ọkachasị ụbọchị nke anyị ga-enwe ike.nweta.
Ì chere na Evan Blass ga-abụ ihe ziri ezi ọzọ ya iPhone 7 ehi ehi?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » IPhone 7 ga-akụ ụlọ ahịa na Septemba 16 dị ka Evan Blass si kwuo
Mkpụrụ akwara a nwere ike gbanwee robotics dị nro
MacBook ma ọ bụ MacBook Ikuku: olee nke n'ime ha abụọ ga-adịrị m mma?